UJay Y. Lee, usekela-mongameli weSamsung, ugwetywe iminyaka emihlanu entolongweni | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UJay Y. Lee, usekela-mongameli weSamsung, ugwetywe iminyaka emihlanu entolongweni
Emva kweenyanga ezininzi zokungaqiniseki, iindaba zisandul 'ukukhathaza umboniso wakutshanje we Galaxy Note 8: UJay Y. Lee, usekela-mongameli weSamsung, ugwetywe iminyaka emihlanu entolongweni emva kokuqwalaselwa unetyala lamatyala amabini okunyoba nokunyhashwa kwemali.
Iindaba zilusizi olukhulu kwinkampani njengoko kubonakala ngathi akunakulindeleka ukuba emva kokudweba isigwebo sakhe, uJay Y. Lee aqhubeke nemisebenzi yakhe njengesekela mongameli weSamsung, ekhokelela kwi khangela inkokeli entsha.
Yonke into ihlala kusapho
UJay Y. Lee usenokuzibona enethamsanqa kuba, kwiminyaka eli-12 ecelwe ngumtshutshisi, ugwetyelwe ukuchitha iminyaka emihlanu ejele. Nangona kunjalo, umonakalo sele wenziwe: ulwaphulo-mthetho lokunyoba nokunyhwaphiliza awathi wagwetyelwa kona kubonisa intonga enzima kuqikelelo lwamazwe ngamazwe lwenkampani.
Ngokuzimeleyo, uJay Y. Lee uyaqhubeka nokuba ngusekela mongameli weSamsung nangona Usebenzise imisebenzi kamongameli yenkampani. Ingaba u "indlalifa kwitrone", ewe, njengoko kuvakala, kokulungileyo nokubi. Utata wakhe, naye otyholwa amatyeli aliqela ngolwaphulo-mthetho olunxulumene norhwaphilizo nangona engazange agwetywe ngalo, nguye okhokela i-Samsung kwishishini, nangona impilo yakhe ebuthathaka imgcina ecaleni.
Ke, abaphathi beSamsung okwangoku babonisa ikamva elingaqinisekanga. Igama lika-Lee Boo-jin liqwalaselwa njengelindelweyo (kumfanekiso ongentla), ewe, udade wecala elikhohlakeleyo, into eya kuthi iphelise ubukhokho obuye babonwa yile nkampani ukusukela oko yaqalwa, ukongeza ekuqokeleleni ingqikelelo yeSamsung yamazwe aphesheya kunye nomntu obhinqileyo. Ukongeza, yonke into iyaqhubeka ukuba phakathi kosapho, okuhle nokubi.
Ngaba oku kugwetywa kuya kulichaphazela ikamva lenkampani nangayiphi na indlela?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » UJay Y. Lee, usekela-mongameli weSamsung, ugwetywe iminyaka emihlanu entolongweni
Iselfowuni entsha yeMeizu isibonisa ukuba iimveliso ezitshiphu azisoloko zimbi